Global Voices teny Malagasy » Lahatsary : Ireo Fandaharana Fampahafantaram-baovao Ho An’ireo Tanoran’ny Kids News Network · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Aogositra 2017 5:00 GMT 1	 · Mpanoratra Juliana Rincón Parra Nandika (fr) i Claire Ulrich, Tantely
Sokajy: Afrika Mainty, Amerika Latina, Azia Atsinanana, Karaiba, Afrika Atsimo, Aruba, Martinika, Myanmar (Birmania), Però, Suriname, Zambia, Fanabeazana, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Tanora, Zavakanto & Kolontsaina
Ao amin'ireo ankohonana amerikana maro, tsy avela mijery ireo fampahafantaram-baovao [amin'ny teny anglisy] amin'ny fahitalavitra ireo ankizy, satria mieritreritra ireo ray aman-dreniny fa mety hanakorontana ny sain'izy ireny ireo sary mivoaka amin'ny vaovao. Inona ary no zavatra fantany amin'ny vaovao mitranga ? [FnM : any amin'ireo firenena tandrefana sasany, manome fandaharana mampahafantatra vaovao natao ho an'ny tanora ireo fantsom-pahitalavitra an'ny fanjakana na ireo ampitaina amin'ny tariby]. Any Birmania, Zambia, Surinam, Afrika Atsimo, Pérou, Indonezia, Antilles Holandey ary any Mozambika, efa afaka mijery gazetiboky-nà vaovao natokana ho azy ireo ankhitriny ireo tanora, amin'ny fahitalavitra na amin'ny Aterineto, izay sehatra iray ihany koa ahafahany maneho ireo heviny sy anovozany loharanom-baovao.
Ny fikambanana holandey Freevoice  moa no mamatsy vola sy mandrindra ireo fandaharana voalaza ireo, alefa amin'ireo fantsona nasionaly any amin'ireo firenena ireo izy ireny [ankoatra ny any Birmania], ary maro amin'ireny tetikasa samihafa ireny no mitodika ihany koa any amin'ny Aterineto mba ho sehatra andraisana ny fanamarihan'ireo ankizy, ny tolokevitr'izy ireny amin'ireo lohahevitra maro horesahina ary ny fomba fikirakiràna ny vaovao.
Any Però, manana ny NAPATV  isika. Ny fomba fiteny hoe No Apto para Adultos (Tsy mety amin'ireo olon-dehibe) no fonosin'ireo fanombohan-teny hoe NAPA. Ao amin'io vohikala io, afaka mijery ireo lahatsary samihafa maro ireo tanora mpampiasa aterineto, maneho hevitra momba azy ireny, mametraka hafatra ao amin'ny efitra firesahana mivantana ary mandray anjara amin'ireo fanadihadiana amin'ny Aterineto. Manana pejy Facebook  koa io fandraisana anadraikitra io, kaonty twitter  ary YouTube . Mandritra io fandaharana 30 minitra mandeha isanandro io, mametraka fanontaniana amin'ny Filoha ireo ankizy, mitantara ny zavatra tian'izy ireo hatao any aoriana, miresaka ny vaovao ihany koa ary manararaotra mampahafantatra ny tiany sy ny tsy tiany. Ohatra  : Kevin, 15 taona, manazava eto amin'ny NAPA ireo olany amin'ireo mpiambina ao an-tanànany, izay mandrara azy tsy hanao “skate” miaraka amin'ireo namany eny an-dàlana, satria hoe “hanimba ny sisin'ny làlana sy ireo fefin'ny làlana [amin'ny teny espaniola ] izy ireo.
Eto ambany, misy fanehoana vaovao fohy  izay iresadresahana ireo famandrihana fitaterana mpianatra, ny vokatr'ireo orinasa mpitrandraka harena ambanin'ny tany eo amin'ny tontolo iainana ary ny olana ara-pahasalamanan'ireo mpianatra izay ahitàna tahanà amboninà firaka ao anatin'ny rà-ny [espaniola] :
Any Antilles miteny anglisy, mandefa amin'ny Aterineto ireo lahatsariny ao amin'ny vohikala ihany koa ny Caribbean Kids Network . Misy dikanteny amin'ny teny anglisy ireo filazambaovao, ary amin'ny teny papiamento  [amin'ny teny frantsay]. Miaraka mamokatra ny vaovao amin'ny fampahalalam-baovao isan-kerinandro ireo mpanao gazety dimy miparitaka amin'ireo nosy samihafa. Ito lahatsary eto ambany ito no nivoaka farany  [teny anglisy, papiamento]. Manaraka fihetsiketsehana manohitra ny fananganana hotely iray ao Aruba ilay fampahalalam-baovao, ary manazava ny hosoka (ahoana no ahafantarana ireo vokatra hosoka, nahoana izy ireny no tsy ara-dalàna). Resahina ihany koa ireo lohahevitra hafa, toy ny famokarana herinaratra “maitso” (mitsinjo ny tontolo iainana) sy ny mozika.
Ho an'i Myanmar (Birmania), tsy mitovy ny toe-draharaha. Ilay vaovao amin'ny lahatsary YouthVoices  dia fandraisana andraikitra tsy dia fahita ihany, izay manome fahafahana ho an'ireo ankizy miteny birmana hahazo torohay sy fampahalalam-baovao ao amin'ny Aterineto, avy amin'ny alalan'i Thaïlandy. Toy izao ny fanoloran'ny freevoice  io fandraisana andraikitra io :
Tsy misy any Birmania ny fahalalahan'ny fanaovana gazety, matetika ny tafika no mampiditra am-ponja ireo maneho tsikera, ary tsy mampita afa-tsy ireo vaovao tsara mikasika ireo jeneralin'ny tafika ny fahitalavitra nasionaly. Mba hamokarana ny fampitàm-baovaony ho an'ireo tanora, avy any Thailande no miasa ny ekipan'ny DVB. Tonga avy any Birmanie, amin'ny alàlan'ny tambajotra camjo (mpitatitra sary) ao an-toerana, ireo sary. Mba hiarovana ny tsy famborahana ny anaran'ireo tanora nifampiresahana, sy ny an'ireo mpitati-baovao, takonany aorian'ireo sarontava miendrika biby ny tavan'izy ireo, ka ahafahan'izy ireo miteny malalaka ny ao am-pony.
Amin'ity lahatsarin'ny YouthVoices , afaka hita ny fomba nampiasàna ireo sarontava. Ao amin'ilay lahatsary taty aoriana indrindra  [amin'ny teny birmana], tsy hita intrsony ireo sarontava, natao nanjavozavona fotsiny ireo endrika.
Afaka hita ao amin'ny vohikala Freevoice.nl  ireo tetikasany sy ireo vaovao hafa mikasika ny Kids News Network
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/08/30/102110/
 tsy avela mijery ireo fampahafantaram-baovao : http://www.parenting.com/article/Child/Development/TV-News-Too-Violent-for-Children
 misy fanehoana vaovao fohy: http://www.youtube.com/watch?v=ogJ5IURtHAs
 Caribbean Kids Network: http://www.cknweb.com/
 no nivoaka farany: http://www.youtube.com/watch?v=CS4YU3TFXzI
 lahatsarin'ny YouthVoices: http://www.youtube.com/watch?v=CzVgOXgrJ8Y
 lahatsary taty aoriana indrindra: http://www.youtube.com/watch?v=zzv7pwaY1so